Ejypta: Tatitra eo an-toerana nandrakitra fandikan-dalàna nihatra tamin’ireo mpiserasera aterineto maherin’ny 43 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Febroary 2019 3:17 GMT
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny volana Aprily 2009) Namoaka tatitra mitondra ny lohateny hoe “Ejypta eo amin'ny kihon-dalana …2008” ny FTMF=ONG Ejipsiana malaza, Foiben'ny Lalàna Hisham Mubarak. Tatitra izay manadihady ny satan'ny fahalalaham-pitenenana ao amin'ny firenena nandritra ny taona 2008, anisan'izany ny fanagadrana sy ny fanorisorenana bilaogera. .
Ahitana fizarana manokana momba ireo fandikan-dalàna mifandraika amin'ny fikatrohana amin'ny aterineto ny tatitra (izay azo trohana amin'ny teny Arabo), amin'ny fampiasana ny teny hoe “mpikatroka aterineto” fa tsy “bilaogera”, na dia ity farany ity aza no tena ampiasaina matetika. Nanadihady ireo hetsika antserasera ataon'ny mpiserasera ao Ejipta sy ny fampiasana ny tolotra tahaka ny Facebook ireo mpanoratra.
Nanamarika ny fitohizan'ny fanagadrana ireo bilaogera telo ny ‘Ejipt eo amin'ny kihon-dalana …2008′, mandray azy ireo ho gadra noho ny fanehoan-kevitra:
Nahitana fanagadrana bilaogera telo noho ny fanehoan-kevitra ny taona 2008: Mosaad Abu Fagr, Yahia Abu Nosera sy Kareem Amer. Nanomboka sy nifarana ny taona 2008 raha mbola any am-ponja izy telo ireo, noho ny fiampangana mifandraika amin'ny fomba fijerin'izy ireo.
Ankoatra ireo bilaogera voalaza etsy ambony, nanambara ny tatitra fa mpampiasa aterineto 43 mahery no niharan'ny fanorisorenana nataon'ny polisy tamin'ny taona 2008, noho ny asan'izy ireo antserasera. Nitanisa ireo hetsika maromaro izay nandraisan'ny aterineto anjara lehibe tamin'ny fikarakarana ny fitokonana faobe 6 Aprily, ny Andron'ny Mpifankatia (Saint Valentin) sy valalamanjohin'ny firaisankina amin'i Gaza ny “Ejipta eo amin'ny kihon-dalana” .
Tamin'ny andro namoahana ity tatitra ity, navoakan'ny ANHRI ihany koa ny fanambaràna fanamelohana mafy sy ny fahagagany amin'ny fanohizana ny fanagadrana ilay bilaogera kristianina Hani Nazeer hatramin'ny 3 Oktobra 2008. Mbola migadra ao amin'ny fonja Arabo Burj Al ilay bilaogera, mijaly noho ny fepetra henjana izy satria gadraina miaraka amin'ny jiolahy.
Niseho ny fisamborana azy noho ny fiarahamiasa tamin'ny Fiangonana tao Naga Hammadi, tanàna niaviany tao amin'ny governoran'i Qena. Nazeer no mpanoratra ny “Karz elhob“.
Nampahatsiahy ny olona momba ny raharaha Aziz tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ny tambajotra arabo ho an'ny zon'olombelona, nilaza hoe:
Nanomboka tamin'ny 1 Oktobra 2008 ny fifandonana, raha niditra tao amin'ny bilaogin'i Hani ireo tanora Miozolomana sasany ary nahita rohy mankany amin'ny tranonkala iray hafa misy tantara elektronika antsoina hoe “Osin'i Azazil ao Lameka” izay ahitana fanafihana ny finoana silamo. Nosoratan'ny mpanoratra tsy fantatra anarana tamin'ny anaran'ny “Mopera Utah” ity sangan'asa ity. Setrin'ilay tantara malaza “Azazil” nosoratan'i Yusuf Zidane ilay tantara, izay heverin'ny mpandala ny nentin-drazana sasany ho toy ny fanafihana ny Kristianisma.
Nanjary tezitra mafy ireo tanora sasany tao an-tanànan'i Hani ary nihevitra fa izy no mpanoratra ny tantara. Nanararaotra izany ny mpitandro filaminana mba hisamborana an'i Hani Nazeer ho famahàna ny olana ateraky ny blaoginy noho ny fanoherany mafy ny silamo sy ny kristianina hiringiriny.